A ga-eme 128th Canton Fair na ntanetị na Ọktọba | ebike Shuangye
Mbido blog News A ga-eme 128th Canton Fair na ntanetị na Ọktọba
Datebọchị ： 2020-09-21 Categories ：News Nlele ： 1,929
Oge nke 128 nke Canton Fair (China Import na Export Fair) ga-aga n'ihu na ntanetị n'etiti njikwa ọrịa. Na Shuangye ebike(Hotebike) na-akpọ ndị nwere mmasị igwe eletriki igwe eletriki ma ọ bụ skuta igwe eletrik, na ndị ahịa anyị na-emekọ ihe ọnụ ka anyị mata karịa anyị juputara na ikpo okwu a. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ụdị igwe eletrik eletrik ọ bụla, biko hapụ ozi ka anyị hapụ. Ya mere, a ga-eme 128th Canton Fair na ntanetị site na Ọktọba 15 ruo 24 ruo ụbọchị 10.
Shuangye Ebike Canton Fair Homepage njikọ:https://ex.cantonfair.org.cn/pc/en/exhibitor/4ab00000-005f-5254-0d4c-08d7ed7a1bdb/
Ntanetị ntanetị mgbasa ozi ntanetị:https://ex.cantonfair.org.cn/pc/en/exhibitor/4ab00000-005f-5254-0d4c-08d7ed7a1bdb/live
Ụbọchị Ọhụụ: Ọnwa iri 15 - 24th, 2020
Igwe eletriki eletriki A5AH26
Motor: 48v 500w brushless moto
Batrị: 48v 10ah / 13ah batrị lithium
Ejiri ike: Breeki 160 diski
Taya: 26 ″ * 1.95 / 28 ″ * 1.75
Gear: 7/9/21 gia
Gburugburu kwa ụgwọOgologo: 40-60 kilomita
Ibu Max: 100-120kgs
A6AH26 ugwu e-igwe
Batrị: 48v 10ah / 13ah batrị na-ewepu
Ibu Max: 100-150kgs
Oge nkwụ ụgwọ: 5-7h
Igwe ọkụ: 3W Ikanam ọkụ ihu na ọdụ ụgbọ mmiri USB
A6AH20F abụba taya eletrik moped
Taya: 20 "* 4.0
Igwe ọkụ: 3W ikanam enyeinwere na USB n'ọdụ ụgbọ mmiri
N'azụ akwa: Steel
A6AH26F kacha mma abụba taya eletrik
Okpokoro: Alloy Alloy 6061
Motor: 36v / 48v 500w brushless moto
Batrị: 36v / 48v 10ah / 13ah zoro ezo batrị lithium
Ejiri ike: Breeki 180 diski
Taya: 26 "* 4.0
Mgbanwe njem: 100mm
Ibu Max: 150-200kgs
Kwadobe: 7/21/27 gia
A1-7 mpịachi electric pedal igwe kwụ otu ebe
Ụba: N'ogige atụrụ aluminom alloy
Motor: 36v 250w brushless moto
Batrị: 36v 10ah / 13ah batrị zoro ezo
Taya: 20 "* 1.75
Ihu igwe n'ihu: ọkụ 3W ikanam nwere ọdụ ụgbọ USB
Gear: 1/7 gia
A1-8 mpịachi electric skuuta
Moto: 36v 250w / 350w moto na-enweghị ntụ
Batrị: 36v 6.6ah / 8ah / 10ah
Okpoko: Aluminium alumini
Breeki: igwe breeki + breeki breeki
Taya: 8-anụ ọhịa
Igwe ọkụ: 3W Ikanam ọkụ na ọdụ ụgbọ USB
Nso kwa ụgwọ: 30-50km
Ibu Max: 80-100kgs
Shuangye (Hotebike) hiwere na 2006 ma nwee afọ 14 OEM & ODM igwe eletriki igwe eletriki. Ọ dị na obodo mara mma nke dị na Zhuhai, China (Mainland). Anglọ ọrụ Shuangye nwere usoro nke ụlọ ọrụ nke oge a na nke zuru oke, na-enyere anyị aka ịmepụta na ịzụlite batrị, moto, ihe nchịkwa, chaja, etiti, hub na ọgwụgwọ elu akụkụ ndị a. Ngwaahịa anyị bụ igwe eletriki igwe eletriki, igwe eletriki igwe eletriki, igwe eletriki igwe eletriki, igwe eletriki igwe eletrik na igwe eletriki igwe eletriki. Anyị nwekwara ọkachamara R & D ọkachamara na ndị otu ọmarịcha ahịa iji nye ngwaahịa na ọrụ ezigbo ngwaahịa. Ngwaahịa niile na-anọrọ onwe ha nyochara ma mepụta ma nwee arụmọrụ kwụsiri ike na ọnụ ala. Shuangye ga - agbaso echiche nke "iguzosi ike n'ezi ihe, itinye uche, nkwụsi ike na ihe ọhụrụ", maka ọrụ gị raara onwe ya nye. Anyị ga-echere gị na 128th Canton Fair ma na-atụ anya ka gị na gị nwee azụmaahịa na ngosipụta dị n'ịntanetị nke Fair.
Ọ bụrụ n’inwere mmasị n’otu igwe igwe eletrik dị n’elu, egbula oge ịhapụ ozi gị n’okpuru. Ihe omuma igwe eletriki eletrik, biko gaa na nke anyị Ụlọ Ọrụ Weebụ.
Tags:128th canton fair ihe ngosi igwe eletrik
Mbụ: Etu ịhọrọ igwe kwụ otu ebe maka ịzụrụ nduzi
Next: Shuangye dị ndụ nke 128th Canton Fair